वि,पन्न र म,जदुरकै हात रित्तो, कुहिएको चामल बाँडेर भ्र,ष्टाचार…हेर्नुहोस!::Point Nepal
वि,पन्न र म,जदुरकै हात रित्तो, कुहिएको चामल बाँडेर भ्र,ष्टाचार…हेर्नुहोस!
बुटवल, ३० चैत । बुटवल–११ देवीनगरका धनबहादुर सुनार रिक्सा म,जदुर हुन। पाँचजनाको उनको परिवार डेरामा बस्छ। रिक्सा चलाएरै उनको परिवारको गु,जारा चल्थ्यो। तर लकडाउनले म,जदुरी रो,कियो। घरमा रासनपानी सकियो। ‘धेरै दिन भयो, केटाकेटीले भरपेट खान पाएका छैनन्। हामीजस्ता गरिब रो,गले हैन, भोकले मर्ने भयौं’, धनबहादुरले दुखेसो पोखे।
पहिलो च,रणको रा,हत सबै गरिब वि,पन्नका घरमा पु¥याइसकेको दा,बी बुटवल उपमहानगरले गरेको छ। तर दैनिक ज्याला म,जदुरी गर्ने धनबहादुरजस्ता थुप्रैले रा,हत पाएकै छैनन्। ‘घरमा अन्न सकिएपछि सरकारले हेर्छ भन्ने सुनेर वडामा गएँ, जनप्रतिनिधिसँग हारगुहार गरे तर भाडामा बस्नेलाई दिन्नम् भनेर फर्काइदिए’, धनबहादुरकी पत्नी मीनाले भनिन्।
नागरिकता नभएका, मतदाता नामवलीमा नाम नभएका, डेरामा बस्ने तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाबाहिरका म,जदुरलाई रुपन्देहीमा रा,हतबाट वञ्चित गरिएको छ। बर्दियाको राजापुरका नि,र्माण म,जदुर माघु थारु, सुशीला थारु र समाज चौधरी तिलोत्तमाको म,णिग्राममा नि,र्माणाधीन घरमा इँटाले बारेर बसेका छन्। तीन महिनाअघि म,जदुरीकै लागि रुपन्देही आएका उनीहरु लकडाउनका का,रण घर जान पाएनन्। काम ब,न्द भयो। खाने खर्च पनि सकियो। तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले बाँडेको भनिएको रा,हत उनीहरुले पाएका छैनन्।
असंगठित क्षेत्रका सयौं म,जदुर भोकभोकै बस्न बाध्य भएको गुनासो बढेपछि नि,र्माण म,जदुरको संगठन काउनले उनीहरुलाइ रा,हत बाँडेको थियो। ‘काउनले रा,हत नदिएको भए भोकै मर्ने रहेछौं’, समाजले भने। सरकारले ग,रिब म,जदुरलाई बे,वास्ता गरेको भन्दै उनले आ,क्रोश पोखे। ‘के सरकार घर हुनेहरुको मात्रै हो ? हामी यो देशका नागरिक होइनौं’, चौधरीले प्रश्न गरे। लकडाउनले फसेका आफूजस्ता म,जदुरलाई घर जाने वातावरण बनाइदिन या उचित रा,हत दिन उनले मा,ग गरे। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।